Sida loo abuuro liis-ka-ciyaar YouTube 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Sida loo abuuro liis-ka-ciyaar YouTube
YouTube shaki la'aan waa bogga wadaagga fiidiyowga ee heer sare. Tan iyo aasaaskeedii, sannadka fog ee tiknoolajiyadda fog 2005, waxay isbeddel ku sameysay habka aan u fahamno internetka. Maanta YouTube wuxuu la mid yahay fiidyowyada noocyadooda kala duwan: laga soo bilaabo dib u eegista, casharrada, fiidiyowyada muusikada, iyada oo loo marayo isjiidka filimka cusub iyo sii deynta ciyaarta fiidiyowga oo ku dhammaanaya boodhadh. Marka la soo koobo, YouTube-ka way fududahay in laga helo fiidiyowyada aan xiiseyno, dhammaan dhadhanka.
Si aan si raaxo leh ugu aragno, waxaan ku arki doonnaa maqaalkan, sida loo sameeyo liis playlist ah, taas oo sida aad si fudud uga qiyaasi karto magaca, aan mid kale ahayn liiska, kiiskeena fiidiyowyada oo si toos ah loogu ciyaari doono midba midka kale. Ereygan ayaa horeyba u yaqaanay kuwa ku sameeyay liistada liiska heesahooda mp3 ama kuwa ku qasban inay la sameeyaan Spotify.
Haddii si gaar ah kuugu cajabisay fiidiyow ka yimid liiskaaga, waxaan sidoo kale kugula talinayaa inaad fiiriso maqaalkeenna oo aan ku sharxi doono sida loo soo dejiyo fiidiyowyada YouTube.
Ka samee kombuyuutar kombuyuutarka kombiyuutarkaaga 'playlist'
Wax kastoo aad ubaahantahay, sameynta liiska kumbuyuutarka ee YouTube desktop waa mid aad u fudud, kaliya raac talaabooyinka hoos ku taxan:
tag aaladda PC-ga ama Mac;
ka dib ku soo gal koontadaada Google;
hel fiidiyowga aad rabto inaad ku darto liiskaaga;
fiidiyowga hoostiisa, dhagsii badhanka "Badbaadi";
menu ayaa ka furmaya kaas oo aad ka dooran karto inaad filimka galisid liistada gawaarida "Goor dambe eeg“, Ama mid ka mid ah liisaska horay loo abuuray;
Isla menu-ka, waxaad sidoo kale ka abuuri kartaa liisaska liiska cusub adoo si fudud u riixaya "Abuur liiska cusub";
ayaa ka soo muuqan doona hoosta laba goobood oo kale, kuwaas oo "magaca"Iyo midka u heellan xulashooyinka gaarka ah ee laga soo xusho liiska ("Primado","Ma liis gareysan", E"Daabac");
markan waxaad riixi kartaa "Abuuri“Oo bilaw inaad ku darto clips.
Si aad u hesho, u dhageysato, ama u tafatirto liistada ciyaarta, kaliya riix "Ururinta". Bogga culeyska saaran waxaad ka heli doontaa dhammaan liistadayada, halkan kaliya guji midka aan xiiseyno si aan wax uga beddelno. cinwaanka biraawsarka cinwaanka Cinwaanku waa mid aad waxtar u leh in si dhakhso leh loo wadaago liistada ciyaarta.
Sidoo kale, waxaa jira hab deg deg ah oo loogu daro fiidiyowyada liistadayada xitaa xitaa si toos ah liiska natiijooyinka raadinta, ama si fudud u dul wareeji fiidiyowga xiisaha leh, waxaad arki doontaa badhanka oo leh saddexda dhibic oo la dhigay meel u dhow magaca fiidiyaha. Adoo gujinaya jiirka, waxaad dooran kartaa sheyga "Ku keydi liiska liiska".
Abuur liistada liiska barnaamijka YouTube-ka oo laga helo taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada
Abuurista liis-ka-ciyaar ku saabsan aaladda moobaylka waxay aad ugu egtahay abuurista liiska-kumbuyuutarka kombiyuutarka miiska, waa inaad:
fur barnaamijka YouTube-ka qalabkaaga;
marin u heliddu waa otomaatig, haddii aad leedahay akoonno dhowr ah oo Google ah, dalabku wuxuu ku weydiin doonaa midka aad doorbideyso inaad isticmaasho;
Waqtigan xaadirka ah, waa inaad ka heshaa fiidiyaha aad xiiseyneyso. Qeybta hoose ee ciyaarta waa "Badbaadi";
haddii aad riixdo oo aad qabato badhanka, shaashad la mid ah shaashadda shaashadda ayaa soo muuqan doonta, halkaas oo aad ka dooran karto inaad ku dhejiso koodhka liistada hore loo abuuray ama meesha aad dooran karto inaad ku abuurto mid cusub;
kiiskan, ku dhufo dusha sare ee "Liis cusub";
marka aad riixdo waa inaad gashaa magaca liiska fiidiyowga iyo goobaha gaarka ah ("Primado","Ma liis gareysan", E"Daabac");
Mar alla markii aan abuurno liistadeena ciyaarta waxaan diyaar u noqon doonnaa inaan gelino dhammaan fiidiyowyada aan doorbidno.
Qaab deg deg ah oo loogu daro fiidiyowyada liistadeena liiska sidoo kale si toos ah liiska natiijooyinka raadinta waa inaad riixdo badhanka oo leh saddexda dhibic oo si toos ah u dhinac socda magaca fiidiyowga oo aad doorato sheyga "Ku keydi liiska liiska".
Si aad u gasho shaashadda ay ku jiraan liiskaaga, laga yaabee inaad wax ka beddesho ama la wadaagto, qaybta hoose ee barnaamijka YouTube-ka, si fudud u riix "batoonka.Ururinta".
Dejinta asturnaanta: Khaas ah, oo aan ku taxnayn mi Daabac si faahfaahsan
Liisaska la abuuray iyo fiidiyowyaduba waxay yeelan karaan saddex heer oo muuqaal ah oo laga arki karo YouTube-ka., waxaan sii qoto dheereynaa si aad markasta u ogaatid midka aad dooranaysid:
Primado, tani waa ikhtiyaarka ugu fudud ee dhammaantood, halkaas oo liistada liiska ay kaliya kuu heli doonaan adiga oo abuuray liiska ciyaarista. Liistada ciyaarta kama muuqan doonto raadinta isticmaale kasta.
Ma liis gareysan, waa ikhtiyaar dhexdhexaad ah, kaas oo liistada cayaartu ay u muuqan doonto oo keliya kuwa leh xiriiriyeheeda, sidaas darteed waa inaad siisaa xiriirka liistada ciyaarta ee aad u sameysay kuwa xiiseynaya.
dadweynaha, tani sidoo kale waa ikhtiyaar aad u fudud oo la fahmi karo, kaas oo liistada cayaartu ay marin u heli doonto isticmaale kasta baadi goob iyo xiriir toos ah.
Passei Direto: sida loo isticmaalo arjiga daraasadda internetka?
Shabakada Spotify: Dhageyso muusikada bilaash iyo xayeysiis la'aan
Sida loo abuuro avatar kuu gaar ah Facebook
Nidaamka Android WebView: waa maxay? Ma lagaa saari karaa?
Buugaag maqal ah: soo degsasho bilaash ah oo buugaag maqal ah oo Talyaani ah iyo ajaanib
Sida loo hubiyo haddii Instagram hoos u dhacday ama aan la heli karin
Barnaamijyada ugufiican ee dhageysiga buugaagta maqalka
Sida loo soo dejiyo fiidiyowyada oo loogu beddelo YTD Video Downloader
Ciyaaryahan IPTV ee ugufiican ee Daawado IPTV Si Fudud
Sida loo wareejiyo WhatsApp chats ka Android in macruufka
Sida loo dedejiyo Android: qaababka wax ku oolka ah!
Shukaansi on Facebook: shukaansi iyo aqoon cusub
Badbaadi ninka yar ... jiirka!